Ogaden News Agency (ONA) – Isdiiwaan Galinta Musharaxiinta Madaxtinimada Soomaaliya oo Bilaabatay.
Isdiiwaan Galinta Musharaxiinta Madaxtinimada Soomaaliya oo Bilaabatay.
Waxaa shalay Khamiistii si toos ah u bilowday diiwaangelinta Musharixiinta xilka Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaaliga ah ee Soomaaliya oo dhacaysa 8 Febaraayo 2017.
Sheekh Shariif Sh Axmed oo horey u soo noqdey Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa noqdey musharixii u horeeyey ee magiciisa diiwaan geliya. Musharixiin badan ayaa dib isu dhigaya tan iyo maalmaha u danbeeya iyadoo la sheegayo in khudbadaha ay u jeedin doonaan Baarlamaanka sida ay diiwaan gelinta ugu kala horeeyeen iyada oo midkasta doonayo in uu noqdo kan u dambeeya.
Musharixiinta ayaa laga doonayaa in ay bixiyaan lacag dhan 30.000 USD, sidoo kale waxaa laga doonayaa in ay keenaan 20 Xildhibaan saxiixooda kuwaas oo taageersan musharaxnimadiisa, Xildhibaan kastana waxa uu saxiixiisa siin karaa ugu badnaan laba musharax.
Dhinaca kale Raysalwasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi ayaa shalay ku dhawaaqay in uu isaga hadhay tartanka kursiga Madaxweynaha Soomaaliya ee dhacaysa 8 febaraayo 2017. Sababta ayuu sheegay in Musharixiintu ay yihiin kuwo aad u badan loona baahan yahay in ay isu tanaasulaan. Wararku waxay sheegayaan in uu u tanaasuley Musharax Cabdulqaadir Cosoble oo goobta uu tanaasulka kaga dhawaaqey ku sugnaa.
Diiwaan gelinta musharixiinta madaxtinimada Soomaaliya ayaa ku eg maalinta Axadda ah oo ay taariikhdu tahay 29 ka bishan aan ku jirro haduu ilaahay yiraahdo.